I-Fuga del Chapo Guzmán, umsebenzi wobunjineli obuphezulu - i-Geofumadas
I-Fuga del Chapo Guzmán, umsebenzi wobunjineli obuphezulu
NgoJulayi, 2015 Zobunjineli
Abo bethu abaye baqondisa umsebenzi wezobugcisa kwiimpawu, siyazi ubunzima beli qeqesho, ukunyusa okubonisa ukungahambi kakuhle kweminye kwiimitha ze-1,500 kunye nawo onke amanyathelo okukhusela okufuneka athathwe.
Phakathi entolongweni El leAltiplano kunye nesayithi apho propati ifumaneka e kumsebenzi emnyama, emlonyeni kwetonela apho abasindileyo Joaquin Guzman Loera, kukho isipili yamanzi yanyanzela abakhi ukuba bagubhe iimitha 30 enzonzobila.
Imithombo kufutshane phando wachaza ukuba lo msele kwakhelwa inkokheli moya Pacific yezemithi asiyo "umgca ngqo" phakathi mthetho kunye nempahla ngokusebenzisa lo walivala ithende umsantsa, kodwa undulations kowandomelezayo abakhi ukuba akhulule ezinye izitenxo kwintsimi.
Ukongeza kwiinjineli, ekwakhiweni komsebenzi ongaphantsi komhlaba ezinye iingcali zithatha inxaxheba njengabaphandi kunye neengcali zehlabathi ukuba bazi iimpawu zomhlaba kwaye bangabikho mngcipheko omkhulu.
Uphando oluqhutywe yiingcali ze-Arhente yoPhando loPhando (AIC) lenze ukuba kwenzeke ukuba ukwazi ukuba indawo yendawo yenziwe ngokukodwa.
Ukongezelela, ininzi yelinki yakhiwa isebenzisa ubuchule bokuthi "idome" evumela amandla amakhulu, kwaye kuphela kumacandelo ambalwa kakhulu kubalulekile ukufaka ifom yomsebenzi ukuxhasa iindonga.
Ezinye iinkcukacha nokutyhila ukuba shot ekungeneni kwitonela kwiseli ka El chapo, inani 20 kwiholo 2 Centre unyango eyodwa, malunga ezilishumi neemitha ezinzulu kwaye ngezinyuko yamaplanga ukufikelela imvelaphi.
Ngakolunye uhlangothi, i-gap yokuphuma kwipropati kwindawo yaseSanta Juanita iimitha ezi-7, apho kukho iiteyithi zokuphuma.
Kodwa ngeli ekupheleni kwetonela nalo lufakiwe pulley ngomatshini, exhaswa yi-injini yombane, abaphengululi bakholelwa ukuba umhlaba lususiwe ukwakhiwa sesicatshulwa kunye indlela ayeza lisetyenziselwe Sisafuna wenkululeko.
Umlinganiselo umsebenzi kwenziwa ziingcali ze-PGR ange ebuzinzisile ukuba endleleni 1.5 khilomitha, kwezinye iindawo, kwitonela ufikelela ezinzulwini ezilishumi 15 kunye 30 iimitha ubuninzi, phantsi umzimba ngamanzi.
Kuyadumala ukuba umsebenzi onjalo wobunjineli uyingxenye yesicwangciso sobuqhetseba kunye nobunzima, ngaphandle kokungenakunikwa.
Xa uqala kuqala, akukho nto yenza umntu ukrokrela ukuba esi sakhiwo msebenzi eziphathekayo namnyama yaba liziko lo msebenzi ngocoselelo ukuba wabavumela Abasindileyo senkokeli Sinaloa zithintele esitokisini sakhe entolongweni iAltiplano mna, xa umasipala Almoloya del kwisixeko saseMexico saseMexico.
Ulwakhiwo lunezindlu ezineendawo zokulala kunye nolunye uhlobo lwezinto zokugcina impahla (indawo yokugcina impahla), ukusuka apho ungena kulo mjelo ofikelela ngaphaya kweemitha ezili- iyakhula iikhilomitha ezingama-1,5 ide ifike, i-millimeter igqibeleleyo, isitya (isanti) sesisele apho i-capo iboshwe emva kokubanjelwa ngoFebhuwari ka-2014.
Kulo phepha eliqhekezayo, kunye nophahla lwe-aluminium apho amanzi ahlongozwa khona, kukho imingxuma kwenye yeendonga ezikhomba ngqo entolongweni.
Akunzima ukucinga ukuba abakhohlisi be-capo bajonge nayiphi na intshukumo yentolongo kwaye ke, isifiso sosuku nosuku isiphelo esiyimpumelelo kulo msebenzi wobunjineli, Ngenxa yobunzima bayo, kufuneka ukuba yayibandakanya abakhi bezakhiwo, i-geologists kunye neenjini.
Nangona ngoku malunga nabaphandi abangamashumi amahlanu kwi-Ofisi kaMshushisi waseMexico, basebenze kwindawo ekukhangela ezinye iinkcukacha, ukutyelela kwisayithi kuvumela iinkcukacha ezincinci kodwa ezitshatyalazayo zenkqubo yokuphunyuka.
Kwi-winery kunye nommandla we-tunnel, kukho i-barbarrow enehlabathi kunye ne-radial, okubonakalayo okubonakalayo kumawaka eemitha ezi-cubic zempahla eza kufuneka zisuswe kulezi nyanga.
Imfihlelo, enye yezinto ezenzekayo kunye neetoni zomhlaba abazithabatha ngaphandle kwendlela kunye nabamelwane bathi abazange babone, ukuba njengabanye abaninzi kulo mbandela ukuba uluvo lukawonkewonke luye lwacaphukisa luya kusombulula.
Le lori, kunye neziselo eziliqela isiqingatha ugqibile, ibonisa ukuba, de kube ngumzuzu wokugqibela, yakhiwa vo kwebhonethi, ezenzeka ngexesha 20.52 yasekuhlaleni (01.52 GMT) 11 Julayi, iphawulwe okwesibini UGuyman ubalekela kwisikhuselo esiphezulu seMexico.
Ukongeza, indawo yokugcina izakhiwo zineepoleni eziliqela (imivalo), mhlawumbi isetyenziselwa ukuxhasa ukubola, kunye nomngxuma osemhlabeni owawusetyenziselwa ukuphuphuma umoya.
Sekusephantsi komhlaba, kukho indawo yokuqala malunga neekhilomitha ezimbini eziphantsi, malunga neekhilomitha ezilishumi elinesibhozo, eziye zasebenza njenge-antechamber kwinqanaba elincinci elakhiweyo kwaye lizele imivalo yamatye kunye nombane omkhulu wokukhanya, enekhono lokukhanyisa umsebenzi omkhulu.
Ukongezelela, i-pulley yamandla eyenza ukuba, ngokubhekiselele kumalungu e-Efe otshutshisiweyo asebenzayo ngeli thuba liye lahlelwa kumajelo eendaba, yasetyenziselwa ukususa umhlaba ogqitywe kwi-tunnel eqala amamitha alingaphantsi.
Emva kokuhla kwamanqanaba amatye enqanaba elincinci, le ngqungquthela iqala, ngokungathandabuzekiyo sele iyingxenye yeengcamango ezihlangeneyo zelizwe.
Malunga nemitha engamashumi asixhenxe ubude kunye nomyinge wamanzi ububanzi, ineepayipi zokungenisa umoya kunye nokufakelwa kombane kwaye ibonisa iibhulabhu ezikhanyisayo ezikhanyisela ubumnyama bale mzila.
Ukumangalisa ukufakwa, kuba nangona kungaphantsi komhlaba, ubuncinane kwimitha yokuqala evulekile ukutyelela, umoya uphefumula usanda kutsha emva kokuba inkqubo yokuphuphuma umoya ivuliwe.
Ekuqaleni kwetonela, iindonga ogama nemiphanda ukuba liqengqiwe phakathi kweminwe kwaye zilumkisa ubu umsebenzi, ngesithuthuthu ngoku odumileyo kuthiwa Sisafuna esetyenziswayo ukubaleka ngokukhawuleza emva bahamba imbobo 50 ngu ngeesentimitha 50 uyabonakala evulekile kwiseli yakhe.
Kule isithuthi enye, Italika kunye netanki yamafutha medium ezongezelelweyo imali top iinqwelo zakho zombini ezazisetyenziswa ukwenza ilizwe ngokulula ngakumbi yazala, enye ikona kwesi sithuba ezincinane wabuye wabona elincinane Iiforikhi zihlala neebhetri ezininzi.
Ukongezelela ekunikezeni iinkcukacha malunga nale ntsebenzo yokuphunyuka kwe-millimeter, ukutyelela kweetoni kunika i-anecdotes.
Ngokomzekelo, malunga neeyure ezinde abaqeshwa balo msebenzi-kuqikelelwa ukuba ubukhulu bomdudu abukwazi ukuba ngaphezu kwembini kunye nokuxhaswa ezimbini ukusuka ekungeneni komhlaba.
Ngezantsi kwezitepsi ezikhokelela kwingxoworha, kwisiqwenga sendonga, imidwebo emibini kunye nokubhala, eluhlaza okwesibhakabhaka, kunye neembalo ezininzi ngokumangalisa obomvu.
Umnqamlezo onesicatshulwa esine-INRI, ikhathuni yendoda enesipili kunye neebhlukhwe ezinde kunye nebinzana elithi "uLer Berde yiBida, i-bastards pure mota (intsangu)."
Nangona sisiphumo sokudinwa, le mizobo inokufumana omnye umda kweli bali likhulu ngamagqabantshintshi abaleke kuthiwe "El Chapo".
Isiganeko esilungele ulawulo lukaRhulumente wase-Enrique Peña Nieto, olubonakalisa ukonakala kwenkqubo kwaye lonakalisa umfanekiso walo wamazwe ngamazwe. Kwaye sele sele liphawule eli lizwe ngonaphakade.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ukutshintsha data lomhlaba Ngaba intanethi!
Post Next Uphuhliso kwi-Software Software njengenjini yenguquOkulandelayo "